Trading Battle Net .com သည်ကုန်သွယ်ရေးရက်ကန်းစင်များသိသောဗဟုသုတ၊ မွမ်းမံချက်များနှင့်သတင်းများဖြစ်သည်။
အစာရှောင်ခြင်း turnaround အချိန်
တိုက်ပွဲအချိန်၊ အမြတ်၊ အရှုံးပမာဏကိုရွေးချယ်နိုင်သည်
အနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀၊ အမြတ် ၅၀% ရနိုင်သည်
Blockchain နည်းပညာ, ငွေပေးငွေယူသမိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု
Open API ဇယားကွက်
Personal VS Personal Skills ပြိုင်ပွဲ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချိန်မိနစ် 30! အထွက်နှုန်းနှစ်ဆ!
မျှတသောကုန်သွယ်မှုစနစ်နှင့် blockchain နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ တစ် ဦး ချင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲလှယ်ခြင်း
အဆင်ပြေသော interface ကိုနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်စွဲစေအင်ဂျင်နှင့်အတူ
မိနစ် ၃၀ ငွေပေးငွေယူ
တစ် ဦး ချင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းအသားတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယှဉ်ပြိုင်မှု
ဂိမ်းနဲ့တူ Dynamic အစစ်အမှန်ရက်ကန်းစင်
blockchain နည်းပညာကို သုံး၍ အယူအဆဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်း
မြင့်မားစွာစွဲငြိဖွယ်ရာ interface ကို
ဂိမ်းကဲ့သို့ကုန်သွယ်မှု၏ Facebook အကောင့်
ဂိမ်းကဲ့သို့ကုန်သွယ်၏ Behance အကောင့်
ဂိမ်းကဲ့သို့ကုန်သွယ်၏ Dribble အကောင့်
ဂိမ်းကဲ့သို့ကုန်သွယ်၏ Linkedin အကောင့်
သုံးစွဲသူများအားနည်းဗျူဟာဆိုင်ရာဂိမ်းကစားခြင်း၏ခံစားမှုကိုပေးရန်စီစဉ်သည်။ နောင်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ၀ ယ်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အမျိုးမျိုးသောတိုကင်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကြီးမားသောဖလှယ်မှုများ၏ Open API ကိုအသုံးပြုခြင်း
OPEN API ၏ Facebook အကောင့်
OPEN API ၏တွစ်တာအကောင့်
OPEN API ၏ Behance account
OPEN API ၏ Dribble အကောင့်
OPEN API ၏ Linkedin အကောင့်
လက်ရှိ virtual simulation ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်မတူဘဲကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဝန်ဆောင်မှုသည်တကယ့် cryptocurrency Exchange ၏ Open API ကိုအသုံးပြုသည်။ အချိန်နှင့်အမျှအချိန်နှင့်အမျှငွေကိုအသုံးပြုသည်။
အခမဲ့ဂိမ်းစည်းမျဉ်းများ၏ Behance အကောင့်
အခမဲ့ဂိမ်းစည်းမျဉ်းများ Dribble အကောင့်
အခမဲ့ဂိမ်းစည်းမျဉ်းများ Linkedin အကောင့်
အရောင်းအ ၀ ယ်တိုက်ပွဲ ၀ န်ဆောင်မှု၏စစ်ပွဲစည်းမျဉ်းအားလုံးကိုအသုံးပြုသူမှဆုံးဖြတ်သည်။ အသုံးပြုသူသည်ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများမှစည်းမျဉ်းများကိုဆုံးဖြတ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများအရစုဆောင်းအသုံးပြုသူများအကြားကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ပါမည်။ ရလဒ်များနှင့်ခွဲဝေမှုအပေါ်အသုံးပြုသူသဘောမတူရှိပါသည်။
Facebook အကောင့် TBet လက္ခဏာသက်သေ
TBet လက္ခဏာသက်သေ၏ Behance account
TBet လက္ခဏာသက်သေ၏ Dribble အကောင့်
Linketin TBet လက္ခဏာသက်သေ
အမျိုးမျိုးသောတိုကင်သည်စစ်ပွဲခန်းကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပြီးစစ်ပွဲခန်းကိုဖန်တီးသောအသင်းဝင်များအတွက်ဆုအချို့ကိုပေးဆောင်နိုင်သည်။ ဂိမ်းကစားခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွင် mini-games အမျိုးမျိုးကိုစတင်လိမ့်မည်။ ဒီ mini-game ဟာဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာရှိတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပြီးပါဝင်ဖို့အမျိုးမျိုးသောတိုကင်များကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအစီအစဉ် (TBET တိုကင် ၃၀)
အရောင်းအ ၀ ယ်တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးရသတင်း၊ ဗဟုသုတ၊ သတင်း၊ ကုန်သည်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲပလက်ဖောင်းသည်ဇွန်လ ၁၀ ရက်ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအဖြစ်အပျက်ကြေငြာပြီးနောက်ရက် ၃၀ အကြာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအပါအဝင် ၁၀,၀၀၀ ကျော်သွားသည်။ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ချစ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်သင့်အားပိုမိုလုံခြုံသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးကုန်သွယ်စစ်တိုက်ပလက်ဖောင်းန်ထမ်း။
TBET Token Overview မင်္ဂလာပါ၊ ဤသည်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်တိုက်ပွဲ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အသုံးပြုသူများကိုစစ်ပွဲစည်းမျဉ်းများ (အချိန်၊ ဆု၊ စသည်ဖြင့်) သတ်မှတ်ရန်နှင့်တိုက်ပွဲများကိုကျင်းပရန်နှင့်ဆုရရှိရန်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်အတွက်ကြီးမားသောလဲလှယ်မှုများတွင်အမျိုးမျိုးသောတိုကင်များရောင်းဝယ်ရန်အသုံးပြုသူများအတွက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ငါ TBET အမှတ်အသားကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။ TBET Token ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် TBET Token သည်စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲများအတွင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ငွေကြေးအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ နိဒါန်းနောက်ထပ် TBET တိုကင်အကျဉ်းချုပ်[ ... ]
TBET တိုကင်များအသုံးပြုခြင်း TBET တိုကင်များကိုကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲများတွင်ပေးအပ်သောအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင် TBET တိုကင်များကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လုပ်ဆောင်မှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးလိမ့်မည်။ 〉 အရောင်းအ ၀ ယ်တိုက်ပွဲကြေးလျှော့စျေးကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြန်လာနှုန်းသည် ၀.၁၁% ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်စျေးကွက်အတက်အကျနိမ့်ကျမှုဖြင့်အမြတ်အစွန်းရရန်ကော်မရှင်အနိမ့်သည်များစွာသြဇာသက်ရောက်သည်။ တိုက်ပွဲမှာပါဝင်သူတွေပါ နိဒါန်းပိုမို TBET တိုကင်အသုံးပြုမှု[ ... ]
Blockchain ကုန်သွယ်မှုစနစ်ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲများ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် blockchain နည်းပညာကိုကျွန်ုပ်တို့တက်ကြွစွာအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ရောင်း / ဝယ်သည်အမိန့်များသည် blockchain ၏အရောင်းအ ၀ ယ်သက်သေပြပြီးသည်နှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များပြုလုပ်နိုင်ရန်လေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရန်အလို့ငှာအချိန်နှင့်တပြေးညီအရောင်းအ ၀ ယ်သက်သေပြနိုင်သော blockchain system ကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စနစ်ကိုတိုးတက်စေရန်သက်သေပြနိုင်သောနည်းပညာနှင့်လုံခြုံမှုရှိသောကုမ္ပဏီများမှ blockchain ဖြေရှင်းချက်များကိုအသုံးပြုသည်။ နိဒါန်းပို Blockchain ကုန်သွယ်မှုစနစ်[ ... ]
အဘယ်ကြောင့် blockchain အပေါ်ကုန်သွယ်စစ်တိုက်တည်ဆောက်
ကုန်သွယ်ရေးစစ်ဆင်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုမီ cryptocurrency simulation investment services ကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပြီးပါပြီ။ ၎င်းတို့အနက်သုံးစွဲသူများထံမှမေးမြန်းချက်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အတားအဆီးမှာကုန်သွယ်မှုနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သက်သေပြထားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ရန်အတွက် blockchain ၏စမတ် KwonTrect နည်းပညာကိုအသုံးချရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများကိုအော်ပရေတာများကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်ရသည်။ နိဒါန်း Blockchain တွင်ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲများတည်ဆောက်ရန်အကြောင်းပြချက်များ[ ... ]
profits အမြတ်အစွန်းမှရရှိသောရန်ပုံငွေပမာဏအနည်းငယ်မျှသာမဟုတ်ဘဲကုန်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်အမြတ်အစွန်းရရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊ အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများပင်။ လက်ရှိငွေလဲလှယ်မှုတွင် ၁၀၀% အထွက်နှုန်းရရှိရန် 0.1ETH ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်၊ သို့သော် 100ETH သာရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ၀.၁ ETH ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး ၁.၀ ETH ၀ င်ငွေရနိုင်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပြီးတိုးမြှင့်မှုကိုသာစောင့်ဆိုင်းနေရသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှအမြတ်အစွန်းများရရှိလာခြင်းကိုချက်ချင်းသိသော Dynamic ၀ န်ဆောင်မှု နိဒါန်းအသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေဖြင့်ပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအမြတ်အစွန်းဖန်တီးခြင်း[ ... ]
ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲဝန်ဆောင်မှု Vision ၏
၎င်းသည်အရင်းအနှီးသေးငယ်သည့်တိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးအမြတ်ရရှိစေသည့်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဝန်ဆောင်မှုကိုပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ Cryptocurrency အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်ငွေပေးချေမှုငွေဖြစ်လွယ်မှုပြproblemနာကို ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် cryptocurrency လဲလှယ်မှု၏ Open API ကိုအပေါများသောငွေဖြစ်လွယ်မှုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အသုံးပြုသူ၏ကုန်သွယ်နိုင်စွမ်းသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအားလုံးသည်သူတို့လိုချင်သည့်စစ်မြေပြင်ခန်းမထဲ ၀ င်ပြီးလုပ်ငန်းတူပစ္စည်းတစ်ခုတည်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ နိဒါန်းပို။ အရောင်းအဝယ်စစ်တိုက်ဝန်ဆောင်မှု Vision[ ... ]
Community Q. ရိုးရိုးစစ်ပွဲနှင့်အသေးစားဂိမ်းကစားနည်းကိုလောင်းကစားခြင်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် - ကျွန်ုပ်တို့သည်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပါ ၀ င်သည့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီး FX နှင့်အခြားအလားတူဂိမ်းများသည်ပြchanceနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အခွင့်အလမ်းကြောင့်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ။ အသိုင်းအဝိုင်း Q. အကယ်၍ သင်ဟာကုန်သွယ်ရေးကောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ ပိုမိုမိတ်ဆက်ခြင်းရိုးရှင်းသောစစ်ပွဲနှင့်လောင်းကစား ၀ ယ်နည်းငယ်ကစားနည်းနှင့်ပတ်သက်သည့်လောင်းကစားနည်း[ ... ]
၂၀၂၀ တွင်စာရင်းပြုစုရန်စီစဉ်ထားပါသလား။ စီအီးအို - ကျွန်ုပ်တို့သည် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများစွာအတွက် bot ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လဲလှယ်အရာရှိများနှင့်ဆက်သွယ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကလဲလှယ်မှုတွင်ပထမဆုံးစာရင်းပြုစုရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်အနာဂတ်စာရင်းကိုစစ်ဆေးလိုပါကအချိန်မရွေးကြေညာချက်ကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့ Telegram အခန်းသို့ကြိုတင်လာပါ။ ဤစီမံကိန်းသည်ကိုရီးယားဝန်ဆောင်မှုထက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုရည်ရွယ်သည်။ နိဒါန်းပို ၂၀၂၀ တွင်စာရင်းပြုစုရန်စီစဉ်ထားပါသလား။[ ... ]
Q. အခန်းပေါင်းများစွာဖန်တီးနိုင်ပြီးပြိုင်ပွဲများစွာတွင်တစ်ပြိုင်တည်းပါ ၀ င်နိုင်ပါသလား။ စီအီးအို - မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုစစ်ပွဲခန်းပေါင်းများစွာဖန်တီးနိုင်ပြီးစစ်အခန်းအများအပြားတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ လက်ရှိအစီအစဉ်သည်အများဆုံးတက်ရောက်သူ ၁၀ ဦး အတွက်စီစဉ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်နှင့်ပါဝင်မှုအခြေအနေများအားကြည့်ရှုနေစဉ်ပါဝင်မှုပေါင်းစုံ၏အတိုင်းအတာကိုချိန်ညှိရန်စီစဉ်ထားသည်။ Q & A အပိုင်းအသိုင်းအဝိုင်း Q. စာရွက်ဖြူကိုကြည့်လိုက်ရင်၊ နိဒါန်းပိုကျွန်ုပ်သည်ပြိုင်ပွဲမျိုးစုံတွင်တစ်ပြိုင်တည်းပါ ၀ င်နိုင်ပါသလား။[ ... ]
သုံးစွဲသူအမြောက်အများသာကုန်သွယ်ခြင်းကိုစစ်တိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Q. အသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်သနည်း။ ထို့အပြင်ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲများကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်အသုံးပြုသူများစွာရှိလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်။ စီအီးအို - လက်ရှိတွင်ကိုရီးယားနှင့်ပြည်ပရှိ PR နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆက်အသွယ်ရှိသည့်စျေးကွက်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ထုတ်ကုန်များကိုပုံမှန်လည်ပတ်စေသောကုန်သွယ်ရေးပြိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီစဉ်ခြင်းဖြင့်ပလက်ဖောင်းပုံရိပ်များကိုစုစည်းရန်စီစဉ်ထားသည်။ သုံးစွဲသူများစွာနှင့်ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ရန်အသုံးပြုသူများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း[ ... ]
TBET တိုကင်များနှင့်လျှော့စျေးများကို ၀ ယ်ယူပါ
Q. ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲများအတွက်အချိန်၊ ဆု၊ စသဖြင့် သတ်မှတ်၍ TBET တိုကင်များဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူပါ။ ဤအမှတ်အသားကိုစစ်ပွဲခန်းများဖန်တီးရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်၊ ၎င်းကိုတည်ဆဲပုံရိပ်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အဘယ်သို့ကွာခြားသနည်း။ သင်ရရှိသောကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သင်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများ (ပြန်လာစသည်) ကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ။ စီအီးအို - ကျွန်ုပ်သည် virtual ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများသည်ကွဲပြားသည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ခြင်းဖြစ်သည် ဝယ်ယူရန်အသုံးပြုသောလျှော့စျေးပစ္စည်းများ၊ TBET တိုကင်များပိုမိုမိတ်ဆက်ပါ[ ... ]
အကယ်၍ သင်စာရွက်ဖြူကိုဖတ်ပါက TBET တိုကင်များသည်ကုန်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုမှအမြတ်အစွန်းများမှအမြတ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်အမြတ်တိုးမြှင့်မည်ဟုဆိုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၀၀% နှစ်ဆအမြတ်သည် 0.1ETH သင်အတွင်း၌ ၀.၂ ETH ရရှိသည်၊ သို့သော် TBET အမှတ်အသားကသင့်အနေဖြင့် ၀.၁ ETH ကိုအတူတူပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင်ပင်စစ်ပွဲတစ်ခု၌ ETH ၁.၀ ရရှိနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ မြေပြင်ပေါ်တွင်ကြည့်လျှင်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ဆင်တူသော်လည်း TBET တိုကင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကွာခြားချက် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပိုမိုသောကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်ဖြင့်ငွေရှာသောနည်းဖြင့်မိတ်ဆက်ပါ[ ... ]
Q. ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲများအတွက်ကုန်သွယ်ရေးအခန်းဖန်တီးရန်လိုအပ်ပြီးအနည်းဆုံးပါဝင်သူအရေအတွက်သည်ဖန်တီးထားသောတိုက်ပွဲခန်းမတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါကတီထွင်မှုအတွက်အသုံးပြုသော TBET အမှတ်အသားနှင့်တိုက်ပွဲခန်းဖျက်ခြင်းနှင့်ပြန်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ သို့ဆိုလျှင်အနိမ့်ဆုံးလူ ဦး ရေမည်မျှလိုအပ်သနည်း၊ ကျွန်ုပ်၏စစ်တိုက်ခန်းကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းအချို့ကားအဘယ်နည်း။ CEO: ခေါင်းဆောင်အပါအ ၀ င်စစ်ပွဲစတင်ရန်အနည်းဆုံးလူ ဦး ရေ နိဒါန်းကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲပိုမိုဆင်နွှဲရန်အတွက်အခန်းတစ်ခန်းဖန်တီးခြင်းလိုအပ်သည်။[ ... ]
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ၏အမြင်တွင်စီမံကိန်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြင့်၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်လိုသည်။ ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲများဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ရေတိုဖြစ်ရပ်ဖြစ်မလား။ စဉ်ဆက်မပြတ်အရှိန်အဟုန်ကဘာလဲ? ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖြစ်အပျက်များကိုရံဖန်ရံခါအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများပြုလုပ်သည်။ လဲလှယ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ပေးသောဒင်္ဂါးများကိုလည်းလျော်ကြေးအဖြစ်ပေးသည်။ ဒါနဲ့ဘာကွာခြားတာလဲ CEO: ယခုအချိန်အထိပလက်ဖောင်းတွင် TBET တိုကင်များကိုအသုံးပြုရန် ၀ န်ဆောင်မှုသုံးမျိုးရှိသည်။ လူတိုင်း TBET ကိုအဆက်မပြတ်စားသုံးသောပုံစံဖြစ်သည် နိဒါန်းနောက်ထပ် TBET တိုကင်၏အရှိန်အဟုန်မှာအဘယ်နည်း။[ ... ]
TBET တိုကင်များကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ။ လက်ရှိပလက်ဖောင်းနဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ CEO: TBET token သည် cryptocurrency ဖြစ်ပြီးစီမံကိန်း၏ကုန်သွယ်မှုတိုက်ပွဲ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည် TBET လက္ခဏာသက်သေသာလျှင်ဖြစ်သည်။ TBET တိုကင်များကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုသည်။ ကုန်သွယ်ရေးစစ်အခကြေးငွေများလျှော့စျေး။ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဝန်ဆောင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်အထွက်နှုန်း ၀.၀၁% ရှိလျှင်ပင်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်အနိမ့်ကိုးကား နိဒါန်း ပို၍ TBET အမှတ်အသားကိုမည်သို့အသုံးပြုသနည်း။[ ... ]
ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲပလက်ဖောင်းကဘာလဲ။ ၎င်းသည်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြပါ။ CEO: Trading Battle သည်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး 'တိုက်ပွဲ' ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်စစ်ပွဲခန်းမ၌ပါ ၀ င်သည့်အခကြေးငွေ (ETH) နှင့်အတူပါ ၀ င်ပြီးတစ်ချိန်တည်းနှင့်ရန်ပုံငွေများဖြင့်ကုန်သွယ်သည်။ ထို့နောက်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောအသုံးပြုသူ ၅၀% သည်ပါဝင်မှုအခကြေးငွေ (ETH) ကိုမျှဝေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်ရှိပြီးသားဖလှယ်မှုများကို အသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်ခြင်းထက် ပို၍ ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ နိဒါန်းပို။ ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲပလက်ဖောင်းကဘာလဲ?[ ... ]
ကျေးဇူးပြု၍ သင်နှင့်သင်၏စီမံကိန်းကိုအတိုချုပ်မိတ်ဆက်ပေးပါ။ CEO - မင်္ဂလာပါ။ ဤသည် Suwon Kim, Trading Battle Project ၏စီအီးအိုဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိုချုပ်တင်ပြရန်၊ ကျွန်ုပ်သည် Bithumb ၏အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော AviBot ၏လည်ပတ်ရေးဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိစီမံကိန်းကိုတင်ပြရန်လဲလှယ်ခြင်းဖြင့်ပေးသော API နည်းပညာကိုတိုးတက်ခဲ့သည်။ ပုစွန်ငါးဖမ်းလှေမှပထမဆုံးစီမံကိန်းကိုမိတ်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းသည် cryptocurrency ဈေးကွက်တွင်ရောင်းချခြင်းသာမကဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းအတွက်သာမက၊ နိဒါန်းပို။ ကုန်သွယ်ရေးတိုက်ပွဲစီမံကိန်းနိဒါန်း[ ... ]
Katok ID: 24MEX
Zerif Lite ကို ပြုစုသူ - ThemeIsle